Raysul-wasaaraha Itoobiya oo Jeediyay Hadal Aan Loogabaranin. | ogaden24
Raysul-wasaaraha Itoobiya oo Jeediyay Hadal Aan Loogabaranin.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya hadal afka baarkiisa ah oo kasoo yeedhay Raysal Wasaaraha magac uyaalka ah ee xukuumada Wayaanaha Hailemariam Desaleng.
Sida xogta aan kuhelayno maqaar-saar Hailemariam oo shir jaraa’id kuqabtay magaalada Addis Ababa ayaa akhriyay waraaq ay kooxda TPLF usoo malmaluuqday oo looga dan lahaa in isaga lagu magac dilo isla markaana karkaarka lagu waydaariyo.
Maqaar-saar Hailemariam oo saxaafada lahadlayay ayaa sheegay in dambiilayaashii kulug lahaa dagaalada shacabka Oromia iyo Soomaalida Ogadenia u dhaxeeyay ay sooqaban doonaan isla markaana ay sootaagi doonaan maxkamad, isagoo sheegay in lala xisaabtami doono.
Maqaar-saar Hailemariam oo hadalka sii watay ayaa sheegay in dagaaladan uu dhiiga badani kudaatay ay kulug lahaayeen mas’uuliyiin sarsare oo katirsan maamulada Oromada iyo Soomaalida, wuxuuna heegay in ay diyaariyeen qorshihii lagula xisaabtami lahaa dambiilayaasha.
Hadalka uu saxaafada usheegay Hailemariam Desalen ayaa umuuqday mid ay kooxda TPLF tu usoo qortay, iyagoo doonaya in ay karkaarka waydaariyaan kadib markuu qaban waayay arintan uu balan qaaday waxayna kooxdu doonaysaa in ay raysalwasaare kusheega dib ula xisaabtanto.
Labada dhidid dhowr ee Soomaalda iyo Oromada ayaa ah kuwo siwayn looga taageero Gobolka Tigrey waxayna kooxda TPLF tu doonaysaa in ay kadifaacdo cid kasta oo kahor timaada danaha qoomiyada Tigreega oo ah in sigaar ah loogu adeego.
Dhinaca kale Maqaar-saar Hailemariam ayaa shirkiisa jaraa’id kaga hadlay arinta afhayeenkii baarlamaanka ee iscasilay isagoo sheegay in uu dambiile yahay isla markaana uu saxaafada siiyay war uusan xukuumada wayaanaha lawadaagin.
Dadka darsa arimaha Itoobiya ayaa sheegaya in hadalka Maqaar-saar Hailemariam uu umuuqdo in uu soo celin doono xukunkii deg dega ahaa ee talisku uu horaan ugu fashilmay kaas oo hadaba si dadban ushaqeeya